2019 မှာ Popular ဖြစ်လာမယ့် Smartphone နယ်ပယ်က Trend များ - PX
2019 မှာ Popular ဖြစ်လာမယ့် Smartphone နယ်ပယ်က Trend များ
Trend ဆိုတာ Smartphone နယ်ပယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို လစ်လျူရှုပစ်ပယ်လို့ မရတဲ့အရာပါ။ Trend တစ်ခု Popular ဖြစ်ပြီဆိုရင် အဲဒီ Trend ဟာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ Customer တွေအနေနဲ့ လက်ခံရတော့တာပါပဲ (Notch is still the best example) ဒီတော့ မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Mobile World Congress (MWC Barcelona) နဲ့အတူ 2019 မှာရော ဘယ်လို Trend တွေ Popular ဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ကြတာပေါ့။
ဒါကတော့ ဟုတ်သည်ရှိ၊ မဟုတ်သည်ရှိ 2019 မှာ သေချာပေါက် Follow လုပ်ရမယ့် Trend ဖစ်လာပါလိမ့်မယ်။ 2019 နဲ့ 2020 ကြားမှာ 5G ကို နေရာအများအပြားမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်း သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ 2018 December မှာ Qualcomm ကနေ Snapdragon 855 နဲ့အတူ 5G Network ကို Support လုပ်တော့မယ်လို့ ကြေငြာပြီးချိန်မှာတော့ Company တွေဟာလည်း 5G Smartphone တွေထုတ်လုပ်ဖို့ကို ဦးတည်လာကြပါတော့တယ်။
4G နဲ့ယှဉ်ရင် 5G Network ဟာ Internet Speed အနေနဲ့ 15-50% အထိ တိုးတက်လာနိုင်ပြီး Netflix 4K Movie တွေကိုတောင် ၂မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင် Down နိုင်မယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီအမြန်နှုန်းနဲ့ထိုက်တန်အောင် ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာလည်း ပိုကြီးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ 5G Support လုပ်မယ့်ဖုန်းတွေဟာလည်း 4G ဖုန်းတွေထက် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ အထိ ပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး 5G Network ကို 2018 မှာကတည်းက စတင်စမ်းသပ်နေပြီး 2019 မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုပေမယ့် 2020 နဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒါကြောင့် 2019 ရဲ့ 5G ဖုန်းတွေဟာ Flagship ပိုင်းကိုပဲ အဓိက Target ထားနိုင်ခြေရှိပြီး 5G ဖုန်းတွေဟာလည်း 2019 မှာ သုံးဖို့ထက် Future-proof ဖြစ်ဖို့နဲ့ Company တွေအတွက် အပြိုင်အဆိုင် ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်မယ့် Trend တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ပိုများပါတယ်။
– Small Notch and Notchless Designs
ဒီ Design ကတော့ 2018 မှာ စခဲ့တဲ့ Design ပိုင်းပြောင်းလဲမှုပါ။ ဒါပေမယ့် 2019 မှာတော့ မနှစ်ကထက် Waterdrop Notch Design ကို ပိုပြီးတွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Mid-range ဖုန်းတွေအတွက် Screen-to-body Ratio များနိုင်သမျှများဖို့ ဒီ Design က အကောင်းဆုံး Solution ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Pin-hole, Punch-hole Design
Display ကို အပေါက်ဖောက်ပြီး Camera ထည့်တဲ့ Design ဟာ Notch ဖျောက်နိုင်ဖို့ ထိရောက်တဲ့ Design တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် နည်းပညာပိုင်းအခက်အခဲရယ်၊ Display တစ်ခုခုထိခိုက်ခဲ့ရင် သာမန် Display ထက် လဲဖို့ခက်နိုင်တာရယ်တွေကြောင့် ဒီ Design ကို Flagship Device တွေမှာပဲ အဓိကသုံးလာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။
Bezel-less Smartphone တွေကို Innovative ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရစေမယ့် User တွေအကြိုက် ရှေ့မှီ၊ နောက်မှီ Design ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Mi Mix လို Display ပေါ်ဘက်မှာ Selfie Camera ကိုတောင် သေးသေးအတင်မခံတဲ့ ဖုန်းမျိုးအတွက်တော့ ဒီ Design ကို ဆက်သုံးလာနိုင်ပြီး OnePlus အနေနဲ့လည်း New Generation မှာ Slider ပါလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Company ကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့ Water Resistance မရနိုင်တာရယ်၊ Slider ရဲ့ Durability ကို စိုးရိမ်မှုရယ်၊ ဖုန်းအရဲ့ အထူပိုများလာနိုင်တာရယ်ကြောင့် ဒီ Design ကို သုံးနိုင်ခြေ နည်းပါးပါတယ်။
လူကြိုက်နည်းတဲ့ Design မို့ သူမတူတဲ့ဖုန်းမျိုး ကိုင်ချင်သူတွေလောက်ကလွဲရင် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကလည်း 2018 မှာ စခဲ့တဲ့ Trend ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် 2019 မှာတော့ Samsung, LG, Sony, Nokia တို့အပြင် Apple တောင် ဒီ Trend ကို Follow လုပ်လာနိုင်ခြေ များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ In-Display Fingerprint ကို ပိုပြီး Scanning Area ကျယ်တဲ့၊ Speed ပိုမြန်တဲ့၊ ပိုပြီး Secure ဖြစ်တဲ့ Unlock Function အဖြစ် တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
– More Megapixel, More Cameras
ဒါကလည်း သေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Trend တစ်ခုပါပဲ။ Sony IMX 586 နဲ့ Samsung Bright GM1 Sensor တွေကြောင့် Mid-range နဲ့ High End ပိုင်းတွေမှာ Megapixel ပိုင်း အားပြိုင်မှုတွေ အဓိကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ 2018 ရဲ့ DXO Mark သရဖူကို ရယူထားတဲ့ Huawei အနေနဲ့လည်း Sony ရဲ့ IMX 607 Sensor, 38 MP Leica Camera နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာနိုင်ခြေ သတင်းတွေထွက်နေသလို Sony ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ Sensor ကို XZ4 မှာ သုံးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေက 2019 ရဲ့ Smartphone Camera Battle ကို ပိုပြီးပြင်းထန်စေဦးမှာပါ။
Camera အရေအတွက်အနေနဲ့လည်း 2018 မှာ အသုံးများခဲ့ကြတဲ့ Dual Camera ကနေ Triple Camera ဆီကို Company အများစုက တက်လှမ်းကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ Third Camera နေရာမှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ Ultra Wide Angle Camera နဲ့ TOF (Time of Flight) 3D Camera ပါ။ Honor V20 နဲ့အတူ မိတ်ဆက်လာတဲ့ 3D Camera ဟာ ကိုယ်ရိုက်ကူးမယ့် လူနဲ့ တခြား Object တွေကို 3D ဆန်တဲ့ပုံတွေအဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုမယ့် Camera ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ Camera တွေဟာ AR အပိုင်းကို အထောက်အကူပြုလာနိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ်။
– Ceramic Body
2019 မတိုင်ခင်က Ceramic ကို ပိုပြီးမာကျော၊ အကြမ်းခံ၊ Premium ဆန်တာကြောင့် Apple Watch လို Smart Device တစ်ချို့မှာ တွေ့ခဲ့ရပေမယ့် Smartphone နယ်ပယ်မှာတော့ Mi Mix Series ကလွဲရင် Ceramic ကို တစိုက်မတ်မတ် သုံးတဲ့ Brand ကို မတွေ့ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 2019 မှာတော့ Apple နဲ့ Samsung တို့က သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Smartphone တွေမှာ Ceramic Body ကို အသုံးပြုတဲ့ Edition တွေကို ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးပိုကြီး၊ Premium ပိုဆန်လာမယ့် Ceramic Flagship Smartphone တွေကို မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
Oppo Find X မှာ သုံးခဲ့တဲ့ Super VOOC ဟာ 2018 မှာ အမြန်ဆုံး Charging စနစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုနည်းတူ တခြား Company တွေကလည်း Battery Capacity များများကို အားမြန်မြန်သွင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကိုယ်စီနဲ့ ကြိုးစားလာကြဦးမှာပါ။ Qualcomm အနေနဲ့လည်း Quick Charge5ကို မိတ်ဆက်လာနိုင်ပြီး Xiaomi မှာလည်း 32W အထိ Support ပေးလာမယ်ဆိုတော့ 2019 မှာ 18W ထက်ပိုတဲ့ Fast Charging Technology တွေကို ပေါပေါများများ မြင်လာရနိုင်ပါတယ်။ Wireless Charging အပိုင်းမှာလည်း 15W ဟာ Standard တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
– Foldable Smartphones
2019 ရဲ့ Creative အဖြစ်ဆုံး နည်းပညာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Trend တစ်ခုဆိုပေမယ့် အနုနယ်ဆုံးနဲ့ ဈေးအရမ်းမြောက်မယ့်အရာမို့ နောက်ဆုံးမှ ထည့်ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ Flexpai အနေနဲ့ ပထမဆုံး Foldable Smartphone ကို ချပြထားပြီး တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ထွက်မလိုလိုနဲ့ ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ Samsung ရဲ့ Flexible Display နဲ့ Smartphone ကို တရားဝင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပို Stable ဖြစ်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Functionality တွေပါတဲ့ Foldable ဖုန်းတွေကိုတော့ 2020 လောက်မှပဲ မြင်တွေ့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ 2019 မှာ Hit ဖြစ်နိုင်တဲ့ Trend တွေပါ။ သင်တို့အနေနဲ့ရော ဘယ်လို Trend တွေက Popular ဖစ်လာနိုင်ဦးမယ်လို့ ဖြည့်စွက်ချင်သလဲ? တကယ်တော့ Trend ဆိုတာ အမြဲလိုက်လုပ်သင့်တဲ့အရာမဟုတ်သလို လုံးဝလစ်လျူရှုထားလို့လည်း မရတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။
2019 မှာ Popular ဖွဈလာမယျ့ Smartphone နယျပယျက Trend မြား
Trend ဆိုတာ Smartphone နယျပယျမှ မဟုတျပါဘူး၊ ဘယျနယျပယျမှာမဆို လဈလြူရှုပဈပယျလို့ မရတဲ့အရာပါ။ Trend တဈခု Popular ဖွဈပွီဆိုရငျ အဲဒီ Trend ဟာ ကောငျးသညျဖွဈစေ၊ ဆိုးသညျဖွဈစေ Customer တှအေနနေဲ့ လကျခံရတော့တာပါပဲ (Notch is still the best example) ဒီတော့ မကွာခငျရောကျရှိလာတော့မယျ့ Mobile World Congress (MWC Barcelona) နဲ့အတူ 2019 မှာရော ဘယျလို Trend တှေ Popular ဖွဈလာဦးမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးကွညျ့ကွတာပေါ့။
ဒါကတော့ ဟုတျသညျရှိ၊ မဟုတျသညျရှိ 2019 မှာ သခြောပေါကျ Follow လုပျရမယျ့ Trend ဖဈလာပါလိမျ့မယျ။ 2019 နဲ့ 2020 ကွားမှာ 5G ကို နရောအမြားအပွားမှာ အသုံးပွုနိုငျအောငျ အကောငျအထညျဖျောမယျဆိုတဲ့သတငျးကလညျး သခြောသလောကျရှိနပေါပွီ။ 2018 December မှာ Qualcomm ကနေ Snapdragon 855 နဲ့အတူ 5G Network ကို Support လုပျတော့မယျလို့ ကွငွောပွီးခြိနျမှာတော့ Company တှဟောလညျး 5G Smartphone တှထေုတျလုပျဖို့ကို ဦးတညျလာကွပါတော့တယျ။
4G နဲ့ယှဉျရငျ 5G Network ဟာ Internet Speed အနနေဲ့ 15-50% အထိ တိုးတကျလာနိုငျပွီး Netflix 4K Movie တှကေိုတောငျ ၂မိနဈလောကျနဲ့ပွီးအောငျ Down နိုငျမယျဆိုပမေယျ့ အဲဒီအမွနျနှုနျးနဲ့ထိုကျတနျအောငျ ဈေးနှုနျးပိုငျးမှာလညျး ပိုကွီးလာဖို့ရှိနပေါတယျ။ ထိုနညျးတူပဲ 5G Support လုပျမယျ့ဖုနျးတှဟောလညျး 4G ဖုနျးတှထေကျ ဒျေါလာ ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ အထိ ပိုပွီးမွငျ့တကျလာနိုငျပါတယျ။
နောကျပွီး 5G Network ကို 2018 မှာကတညျးက စတငျစမျးသပျနပွေီး 2019 မှာ တရားဝငျမိတျဆကျမယျဆိုပမေယျ့ 2020 နဲ့နောကျပိုငျးမှာမှ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုနိုငျခွမြေားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ 2019 ရဲ့ 5G ဖုနျးတှဟော Flagship ပိုငျးကိုပဲ အဓိက Target ထားနိုငျခွရှေိပွီး 5G ဖုနျးတှဟောလညျး 2019 မှာ သုံးဖို့ထကျ Future-proof ဖွဈဖို့နဲ့ Company တှအေတှကျ အပွိုငျအဆိုငျ ပိုကျဆံပိုရှာနိုငျမယျ့ Trend တဈခုဖွဈလာဖို့ ပိုမြားပါတယျ။
ဒီ Design ကတော့ 2018 မှာ စခဲ့တဲ့ Design ပိုငျးပွောငျးလဲမှုပါ။ ဒါပမေယျ့ 2019 မှာတော့ မနှဈကထကျ Waterdrop Notch Design ကို ပိုပွီးတှရေ့ဖို့ရှိနပေါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ Mid-range ဖုနျးတှအေတှကျ Screen-to-body Ratio မြားနိုငျသမြှမြားဖို့ ဒီ Design က အကောငျးဆုံး Solution ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Display ကို အပေါကျဖောကျပွီး Camera ထညျ့တဲ့ Design ဟာ Notch ဖြောကျနိုငျဖို့ ထိရောကျတဲ့ Design တဈခုဖွဈလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ တဈဖကျကကွညျ့ရငျ နညျးပညာပိုငျးအခကျအခဲရယျ၊ Display တဈခုခုထိခိုကျခဲ့ရငျ သာမနျ Display ထကျ လဲဖို့ခကျနိုငျတာရယျတှကွေောငျ့ ဒီ Design ကို Flagship Device တှမှောပဲ အဓိကသုံးလာနိုငျခွရှေိနပေါတယျ။
Bezel-less Smartphone တှကေို Innovative ဖွဈတယျလို့ ခံစားရစမေယျ့ User တှအေကွိုကျ ရှမှေီ့၊ နောကျမှီ Design ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ Mi Mix လို Display ပျေါဘကျမှာ Selfie Camera ကိုတောငျ သေးသေးအတငျမခံတဲ့ ဖုနျးမြိုးအတှကျတော့ ဒီ Design ကို ဆကျသုံးလာနိုငျပွီး OnePlus အနနေဲ့လညျး New Generation မှာ Slider ပါလာမယျဆိုတဲ့သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။ Company ကွီးတှအေနနေဲ့ကတော့ Water Resistance မရနိုငျတာရယျ၊ Slider ရဲ့ Durability ကို စိုးရိမျမှုရယျ၊ ဖုနျးအရဲ့ အထူပိုမြားလာနိုငျတာရယျကွောငျ့ ဒီ Design ကို သုံးနိုငျခွေ နညျးပါးပါတယျ။
လူကွိုကျနညျးတဲ့ Design မို့ သူမတူတဲ့ဖုနျးမြိုး ကိုငျခငျြသူတှလေောကျကလှဲရငျ စိတျဝငျစားမှု နညျးပါးပါလိမျ့မယျ။
ဒါကလညျး 2018 မှာ စခဲ့တဲ့ Trend ပါပဲ။ သို့ပမေယျ့ 2019 မှာတော့ Samsung, LG, Sony, Nokia တို့အပွငျ Apple တောငျ ဒီ Trend ကို Follow လုပျလာနိုငျခွေ မြားနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈထဲမှာတော့ In-Display Fingerprint ကို ပိုပွီး Scanning Area ကယျြတဲ့၊ Speed ပိုမွနျတဲ့၊ ပိုပွီး Secure ဖွဈတဲ့ Unlock Function အဖွဈ တှရေ့နိုငျပါတယျ။
ဒါကလညျး သခြောပေါကျဖွဈလာနိုငျတဲ့ Trend တဈခုပါပဲ။ Sony IMX 586 နဲ့ Samsung Bright GM1 Sensor တှကွေောငျ့ Mid-range နဲ့ High End ပိုငျးတှမှော Megapixel ပိုငျး အားပွိုငျမှုတှေ အဓိကဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ 2018 ရဲ့ DXO Mark သရဖူကို ရယူထားတဲ့ Huawei အနနေဲ့လညျး Sony ရဲ့ IMX 607 Sensor, 38 MP Leica Camera နဲ့အတူ ပှဲထှကျလာနိုငျခွေ သတငျးတှထှေကျနသေလို Sony ကိုယျတိုငျလညျး ဒီ Sensor ကို XZ4 မှာ သုံးလာနိုငျတယျဆိုတဲ့သတငျးတှကေ 2019 ရဲ့ Smartphone Camera Battle ကို ပိုပွီးပွငျးထနျစဦေးမှာပါ။
Camera အရအေတှကျအနနေဲ့လညျး 2018 မှာ အသုံးမြားခဲ့ကွတဲ့ Dual Camera ကနေ Triple Camera ဆီကို Company အမြားစုက တကျလှမျးကွဖို့ရှိနပေါတယျ။ Third Camera နရောမှာ ဖွဈလာနိုငျခွအေမြားဆုံးကတော့ Ultra Wide Angle Camera နဲ့ TOF (Time of Flight) 3D Camera ပါ။ Honor V20 နဲ့အတူ မိတျဆကျလာတဲ့ 3D Camera ဟာ ကိုယျရိုကျကူးမယျ့ လူနဲ့ တခွား Object တှကေို 3D ဆနျတဲ့ပုံတှအေဖွဈ ဖနျတီးပေးနိုငျဖို့ အထောကျအကူပွုမယျ့ Camera ပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီ Camera တှဟော AR အပိုငျးကို အထောကျအကူပွုလာနိုငျခွေ ရှိနပေါတယျ။
2019 မတိုငျခငျက Ceramic ကို ပိုပွီးမာကြော၊ အကွမျးခံ၊ Premium ဆနျတာကွောငျ့ Apple Watch လို Smart Device တဈခြို့မှာ တှခေဲ့ရပမေယျ့ Smartphone နယျပယျမှာတော့ Mi Mix Series ကလှဲရငျ Ceramic ကို တစိုကျမတျမတျ သုံးတဲ့ Brand ကို မတှဖေူ့းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ 2019 မှာတော့ Apple နဲ့ Samsung တို့က သူတို့ရဲ့ မြိုးဆကျသဈ Smartphone တှမှော Ceramic Body ကို အသုံးပွုတဲ့ Edition တှကေို ထုတျလုပျသှားမယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဈေးပိုကွီး၊ Premium ပိုဆနျလာမယျ့ Ceramic Flagship Smartphone တှကေို မွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။
Oppo Find X မှာ သုံးခဲ့တဲ့ Super VOOC ဟာ 2018 မှာ အမွနျဆုံး Charging စနဈတဈခုဖွဈခဲ့တယျ။ ထိုနညျးတူ တခွား Company တှကေလညျး Battery Capacity မြားမြားကို အားမွနျမွနျသှငျးနိုငျဖို့ နညျးလမျးကိုယျစီနဲ့ ကွိုးစားလာကွဦးမှာပါ။ Qualcomm အနနေဲ့လညျး Quick Charge5ကို မိတျဆကျလာနိုငျပွီး Xiaomi မှာလညျး 32W အထိ Support ပေးလာမယျဆိုတော့ 2019 မှာ 18W ထကျပိုတဲ့ Fast Charging Technology တှကေို ပေါပေါမြားမြား မွငျလာရနိုငျပါတယျ။ Wireless Charging အပိုငျးမှာလညျး 15W ဟာ Standard တဈခု ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
2019 ရဲ့ Creative အဖွဈဆုံး နညျးပညာဖွဈလာနိုငျတဲ့ Trend တဈခုဆိုပမေယျ့ အနုနယျဆုံးနဲ့ ဈေးအရမျးမွောကျမယျ့အရာမို့ နောကျဆုံးမှ ထညျ့ရေးဖွဈသှားတာပါ။ Flexpai အနနေဲ့ ပထမဆုံး Foldable Smartphone ကို ခပြွထားပွီး တဈနှဈပွီးတဈနှဈ ထှကျမလိုလိုနဲ့ ကွာမွငျ့လာပွီဖွဈတဲ့ Samsung ရဲ့ Flexible Display နဲ့ Smartphone ကို တရားဝငျထုတျလုပျရောငျးခလြာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပို Stable ဖွဈပွီး ပိုကောငျးတဲ့ Functionality တှပေါတဲ့ Foldable ဖုနျးတှကေိုတော့ 2020 လောကျမှပဲ မွငျတှရေ့နိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဒါတှကေတော့ လကျရှိအခြိနျမှာထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှအေပျေါမူတညျပွီး ခနျ့မှနျးထားကွတဲ့ 2019 မှာ Hit ဖွဈနိုငျတဲ့ Trend တှပေါ။ သငျတို့အနနေဲ့ရော ဘယျလို Trend တှကေ Popular ဖဈလာနိုငျဦးမယျလို့ ဖွညျ့စှကျခငျြသလဲ? တကယျတော့ Trend ဆိုတာ အမွဲလိုကျလုပျသငျ့တဲ့အရာမဟုတျသလို လုံးဝလဈလြူရှုထားလို့လညျး မရတဲ့အရာတဈခုပါပဲ။